AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဦး(နိုင်တလချမ်း) အင်တာဗျူး (သံဖြူဇရပ် ၂ -ပြည်နယ်လွှတ်တော်) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဦး(နိုင်တလချမ်း) အင်တာဗျူး (သံဖြူဇရပ် ၂ -ပြည်နယ်လွှတ်တော်)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 8, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 299 Views
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်အယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ-ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ကတည်းကကျွန်တော် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီထဲ၀င်ပြီးတော့ တာ၀န်ယူလာတာ ၅နှစ်ရှိပြီးပေါ့။ အဲဒီမှာ မွန်ပြည်နယ်အတွက် လွှတ်တော်အတွင်းတိုက်ပွဲ၀င်တာပေါ့၊ မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေး အတွက်တောင်းဆိုလာတာ အထိုက်အလျောက်ရခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေအများကြီး
ကျန်နေသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဒီ ၅နှစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ ကျန်နေသေးတဲ့ ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ဆက်ပြီးတောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ၂၀၁၅မှာဆက်ပြီး၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။
မေး-အခုလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိူးတွေ၊ မွန်ပြည်နယ်သား အတွက် ဘာတွေအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာ အရင်ကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေသလိုမျိူး လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့လည်း မတွေ့ဖူးခဲ့ဘူးပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ အခုလို ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကို တွေ့လာတဲ့အတွက် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
မေး-တကယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရပြီးဆိုပါက မွန်လူမျိူးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ-အဲဒါဆိုရင်နှစ်မျိုူးရှိတာပေါ့။ ပထမတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့လူမျိူးရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိူး မရရှိသေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေ။ ဥပမာ-ကိုယ့်ဒေသမှာ မွန်စာပေသင်ကြားရေးအတွက်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိူးတွေက အစိုးရကျောင်းတွေမှာပဲ စာသင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့မွန်ကလေးတွေ မွန်စာမတတ်ဘူး ဆိုရင် တစ်နေ့မှာမွန်လူငယ်တွေဟာ မွန်လူမျိူးတွေရဲ့အကျိူးအတွက် စဉ်းစားဖို့ဆိုတာ ခက်သွားမှာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက မွန်စာတတ်ဖို့အတွက် မွန်စာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သင်ကြားခွင့် ရှိရမယ်။ ပြီးတော့ မွန်အမျိူးသားနေ့လို မိမိတို့အလေးအမြတ်ထားကြတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်မျိူးကို တရား၀င်ရုံးပိတ်ရက်လုပ်ပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာလည်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာရှိဖူးခဲ့တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့လူမျိူးတွေ အစိုးရရုံးတွေသွားတဲ့အခါမှာ အခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ တန်းတူမဆက်ဆံခံရတာတွေရှိတယ်၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မူတွေရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်။ ရုံးတွေ သွားလို့ရှိရင်ငွေတောင်းတာတို့ ဥပဒေနဲ့ကိုင်ပေါက်တာမျိုး အခုချိန်အထိရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အများကြီးလျော့နည်းလာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဌာနကလူတွေအကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အများကြီးသိခဲ့ရတာပေါ့။ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အထက်ကို တင်ပြခဲ့တာတွေလဲရှိခဲ့တာပေါ့။ ဒါတွေကလည်း အကျိူးကျေးဇူး အများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာတွေလဲရှိခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မြင်တာက အစိုးရအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေတာ၊ ပျက်စီးနေတာကို သူတို့ကကျွန်တော်တို့လို မခံစားမိဘူး။ ကျွန်တော်တို့က မွန်လူမျိူးတွေဖြစ်တယ်၊ မွန်လူထုတွေကြားမှာ နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မွန်လူငယ်တွေအခုလိုဖြစ်နေတာကို ဒီအတိုင်းကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကပဲ ပထမဆုံး ဒီမူးယစ်ဆေးတွေကို ပပျောက်အောင်တိုက်ဖျက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှာဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁ နဲ့ ၂ က ဖွံ့ဖြိုးမှုခြင်း မတူပါဘူး။ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁ ဖြစ်တဲ့ သံဖြူဇရပ်-ကျိုက်ခမီ-စက်စဲဘက်မှာဆိုရင် လမ်းတွေ တအားကောင်းတယ်။ ဒီကောင်းနေပြီးသားလမ်းကို အစိုးရက ဘတ်ဂျက်တွေထပ်ချပြီးတော့ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့ ပြင်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့ အရင်အစိုးကလက်ထက်တစ်လျောက် ပြည့်စုံနေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီဘက်ရောက်လာတော့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ လွှတ်တော်ကလည်း ရှိလာတော့ ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတင်ပြခွင့်တွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ဟိုဘက်ခြမ်းနဲ့ ဒီဘက်ခြမ်းက ဖွံ့ဖြိုးမှုဘာလို့မတူညီရတာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပြလို့ရလာတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသ(သံဖြူဇရပ်တောင်ဘက်ခြမ်း) ဘက်မှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးမူကရှိလာတာပေါ့နော်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက သံဖြူဇရပ်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနိုင် AMDP မွန်အမတ်က ၃ ဦးရှိနေတယ်။ အမျိူးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အပြင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ ပြည်နယ်မှာတင်ပြလို့ရတာကိုတော့ ကျွန်တော်ဒီကနေတင်ပြခဲ့သလို ဒီကနေတင်ပြလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုတော့ နေပြည်တော်ရောက် ကိုယ်စားလှယ် ၂ယောက်ကို အချက်အလက်တွေပေးပြီးတော့ တင်ပြတောင်းဆိုမူတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့််အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ တိုးတက်လာတာက ဒီလွှတ်တော်သက်တမ်း ၅နှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပေါ့။ ဒါ့အပြင် တခြားအသေးအမွှားတွေလည်းရှိတာပေါ့။ လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေသေးတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ဒီလာမယ့် ၅နှစ်မှာ ဒီထက်ကိုပိုပြီးတော့အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေါ့။
မေး-အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ််တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ?
ဖြေ- မွန်ပြည်သူတွေဆီကနေအများဆုံးကြားနေရတာက မွန်စာသင်ကြားခွင့်ပေါ့။ အခုဆိုရင်မွန်စာကိုသင်ကြားခွင့်ရနေပြီ။ ကျောင်းချိန်အတွင်းမှာကိုပေါ့နော်။ သင်ကြားခွင့်ရပြီးဆိုပေမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဘယ်လိုခန့်အပ်မှာလဲ၊ လစာတွေကိုဘယ်က ပေးမလဲဆိုတာခုချိန်ထိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဖြစ်သေးဘူး။ ဒါကြောင့်လွှတ်တော်ထဲမှာရော ပညာရေးဌာနကလူတွေကပါ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထက်ကိုတင်ပြထားတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ကျောင်းဆရာတွေကိုလည်း အစိုးရခန့်အပ်ပေးဖို့၊ လစာတွေကိုလည်း အစိုးရကထောက်ပ့ံဖို့နဲ့ မွန်ကျောင်းဆရာတွေ အစိုးရ၀န်ထမ်းလိုဖြစ်လာအောင်အတွက်ပေါ့နော်။ ပြီးလို့ရှိရင် မွန်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့၊ အဲဒါတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ့်ဟာတစ်ခုပေါ့နော်။ ပြီးရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုတာ၊ သူကအထက်မှာ အဲဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအောက်ခြေမှာဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာ သူလာမတွေ့နေဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီအောက်ခြေကနည်းနည်းလေးမှ မပြောင်းလဲနေသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံပြီးတော့ ဒီအောက်ခြေကအုပ်ချုုပ်သူတွေကို ပြောဆိုတိုက်ပွဲ၀င်နေတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ကတော့ နည်းနည်းပြောင်းလဲလာတာရှိတယ်။ ဒီအောက်ခြေကနေပြောလို့ မရဘူးဆိုရင် အထက်ကို သွာပြောတယ်။ ပြောနေပေမယ့်လည်း ဟိုလွှဲဒီလွှဲနဲ့သေသေချာချာ အရေးယူမူတွေပြုလုပ်ပေးနေတာတော့ မတွေ့ရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကို ဒီအတိုင်းဆက်ထားလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ ယုတ်လျော့နေတဲ့ဟာတွေကို ကျွန်တော်တို့က လွှတ်တော်ထဲက ဒီမိုကရက်အင်အားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ အောက်ခြေအဆင့်အထိပြောင်းလဲနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ သူများဒေသနဲ့မတူဘဲကျန်နေသေးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှူအပိုင်းတွေကို သူများဒေသနဲ့တူအောင် ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ အဲဒီလိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်သွားမှာပေါ့နော်။
မေး-မွန်ပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အမျိူးမျိူးတွေထဲက ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိသလဲ?
ဖြေ-မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်အစိုးရစစ်စစ်ပေါ့၊ ဖြစ်စေချင်တာက မွန်အစိုးရပေါ့နော်။ မွန်လူမျိူးထဲက အစိုးရဖြစ်လာမျိူးပေါ့ အဲဒီလိုမျိူးကိုဖြစ်စေချင်တာ။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ လွှတ်တော်ထဲမှာ မွန်အမတ်တွေများများပါလာမှ မွန်လူမျိူးတွေ လိုချင်တဲ့ မွန်အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ မွန်အမတ်တွေအရေအတွက်များများနိုင်မှ ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီးမှ မွန်အမတ်ကဖြစ်တဲ့ မွန်အစိုးရဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်။ မွန်အစိုးရဆိုတာ ၀န်ကြီးချုပ်လိုနေရာမှာ မွန်ပါတီကနိုင်လာတဲ့ မွန်အမတ်ဖြစ်ဖို့၊ ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲက လူကြီးနေရာတွေမှာ မွန်လူမျိူးတွေဖြစ်လာဖို့၊ အဲဒါမှပဲ (မွန်)ပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်လာမှာပေါ့လေ။ အခုအခြေနေမှာဆိုရင် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ ဆိုပေမယ့်လည်း မွန်လူမျိုးတွေပြောပီးတဲ့ အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအာဏာရဖို့အတွက် အဲဒီလိုနေရာမျိူးတွေအထိ ရည်ရွယ်ထားရတာပေါ့လေ။ ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေထဲမှာ မွန်လူမျိူးတွေပြောပီးတဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာပေါ့လေ။
မေး-မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ-အခုဆိုရင်မွန်ပါတီက ၃ ပါတီတောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊ မွန်ပါတီတွေလည်းများလာပြီး။ ပြီးလို့ရှိရင် တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့လည်း တက်လာတဲ့သူတွေရှိနေတာဆိုတော့ ဒီတစ်ခါပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့အခါ နည်းနည်းတော့အခက်တွေ့စေတာပေါ့။ အရင်ကမွန်ပါတီတစ်ခုတည်းဆိုတော့ မဲပေးရွေးချယ်ရတာလွယ်တယ်။ ဟသာင်္တွေ့တာနဲ့ တစ်ခါတည်းပေးလိုက်တာပဲ။ အဲဒီတော့ မွန်ပါတီက မဲနိုင်သွားတော့တာပဲ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပါတီကလည်းများလာတယ် တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေလည်း များလာတယ်ဆိုတော့ ရွေးတဲ့အခါဟိုပါတီ ဒီပါတီရွေးဆိုပြီးတော့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မွန်လူမျိူးတွေရဲ့အကျိူးကို အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်သူ၊ မွန်လူမျိူးအပေါ်တကယ်အနစ်နာခံမယ့်သူ အစစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာပါ။ ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးတွေကို ကိုယ်စားလှယ်ရွေးတဲ့အခါမှန်စေချင်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်တာ မှန်မှပဲပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်။ တကယ်လို့ရွေးချယ်တာမှားသွားမယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီး။ တစ်ချို့မွန်အမတ်တွေဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲကိုသာရောက်သွားတာ ဘာမှရေရေရာရာမလုပ်ပေးနိုင်တာတွေ ရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သေသေချာချာရွေးချယ် စေချင်တာပေါ့။ ပြောချင်တာက ဒီလူကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပဲ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးတယ်ဆိုပြီးတော့ မရွေးစေချင်ဘူး၊ မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ မရွေးစေချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဲတစ်ပြားကတန်ဖိုးရှိတယ်လေ။ ကိုယ့်လူမျိူးအတွက်သေသေချာချာရွေးပြီးမှ မဲပေးသင့်တယ်လို့ ပြည်သူတွေကိုမှာချင်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မင်းစိုင်းမွန် 2015-09-08
Previous မြေယာအငြင်းပွားမှု တရားလိုပြသက်သေမလာရောက်သဖြင့် စီရင်ချက်မချနိုင်
Next သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ခြေလက်တုအခမဲ့ပြုပြင်ပေး